Ajụjụ - Nanjing Skypro Rubber & Plastic Co., Ltd.
Ihe Fabricgba ahụ
Ihe Neo Loose
Mpempe akwụkwọ Rubber
Mpempe akwụkwọ plastic
Mpempe akwụkwọ PET
Mpempe akwụkwọ PVC
Mpempe akwụkwọ TPU
Ihe Site Ngwa
Ihe conveyor Belt Ihe
Ihe Nweta PVC
Ụfụfụ mkpọpụrụ adịgboroja
Ihe Site na Ihe
Ogwe Mmanụ a Honeyụ
Mpempe akwụkwọ Rubin Neo Loose
Neo Loose Fabric Nyefee
Mpempe akwụkwọ Foom EVA
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ngwaahịa Ahịa Rubin
Gịnị bụ ikike mmepụta kwa afọ?
Anyị na-arụpụta ihe karịrị 18000 tọn mpempe akwụkwọ rọba kwa afọ.
Kedụ ka m ga-esi nweta ụfọdụ nlele?
Obi dị anyị ụtọ inye gị ngwaahịa nlele n'efu. A na-atụ anya ka ndị ahịa ọhụụ na-akwụ ụgwọ maka ọnụahịa nnyefe, a ga-ewepụ ego a site na ịkwụ ụgwọ maka usoro iwu.
Kedụ ike nke ụlọ ọrụ gị?
Skypro bụ ọkachamara na-emepụta mpempe akwụkwọ rọba karịa afọ iri abụọ. Nnukwu ụlọ ọrụ roba kasị mma iri na China.
Onye na-elekọta ahịa